Exfoliation - သင်၏ဆံပင်ပိုမိုမြန်ဆန်သောသော့ဖြစ်သည် Bezzia
Susana godoy | 07/04/2021 12:00 | လှပမှု
ငါတို့ဆံပင်တွေဘယ်လိုမြန်မြန်ကြီးထွားလာတာကိုငါတို့မြင်တာပထမဆုံးအကြိမ်တော့မဟုတ်ဘူး။ ကောင်းပြီ၊ အကယ်စင်စစ်သင်သည်၎င်းအတွက်ဖြေရှင်းနည်းအမျိုးမျိုးကိုရှာဖွေရန်အနည်းငယ်ပင်ပန်းနေပြီဖြစ်သည်။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရလေ့ရှိသည့်အသုံးအများဆုံးတစ်ခုကိုတွေ့ရလိမ့်မည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ချောင်းထိပ်တွင်တွေ့ရသော်လည်း၎င်းကိုသူအမှန်တကယ်သယ်ဆောင်ပေးသည့်အရေးကြီးမှုကိုအမြဲတမ်းပေးလေ့မရှိချေ။ exfoliation.
ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျန်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာဖြစ်ပျက်တဲ့အတိုင်း exfoliation ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသားအရေကိုသိသိသာသာတိုးတက်စေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အဲဒါကြောင့်ပဲ ဦး ခေါင်းခွံကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်၊ကျန်ရစ်တော့မည်မဟုတ်။ မည်သည့်အဆင့်များကိုသင်လိုက်နာသင့်ကြောင်းသင်သိလိုပါသလား။
2 ဦး ရေပြားကိုကော်ဖီဖြင့်ဖြန်းပါ
ငါတို့သိသည့်အတိုင်း exfoliate သည်ဆဲလ်သေများကိုနှုတ်ဆက်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အရေပြားပေါ်တွင်ပြုလုပ်သည့်အခါပိုလျှံသောအရာများကိုဖယ်ရှားပစ်မည်ဖြစ်ပြီး၊ ဤကိစ္စတွင်အလားတူအဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်ပျက်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်မည့်အရာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး ရေပြားကိုအမြဲတမ်းလိုအပ်နေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အဆီများသောအားဖြင့်များသောအားဖြင့်ခြောက်သွေ့နေစဉ်အဆီများစုပုံလေ့ရှိသည်။ ကောင်းမွန်သောသုတ်ဆေးဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤinရိယာရှိအရေပြားကိုကူညီခြင်း၊ ဆံပင်တွင်ကျန်ရှိနေသောအချို့သောထုတ်ကုန်အကြွင်းအကျန်များကိုနှုတ်ဆက်ခြင်းနှင့်ဆံပင်လည်ပတ်ခြင်းကိုပိုမိုအားကောင်းလာစေခြင်းဖြင့်ဆံပင်ကိုအားဖြည့်ပေးလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့အဆိုပြုထားသောသဘာဝကုစားနည်းများကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ဤအရာအားလုံးကိုသင်တွေ့နိုင်ပါသည်။
ကော်ဖီမှုန့်သည်ကျွန်ုပ်တို့ဖယ်ရှားလိုသောအချိန်တွင်အများဆုံးအသုံးပြုသောကုစားနည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအိမ်တွင်သေချာစွာပါ ၀ င်သည့်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်ငါတို့အရောအနှောကိုစတင်ပြင်ဆင်ဖို့ကော်ဇော ၄ ဇွန်းလိုအပ်တယ်။ ဒါပေမယ့်ဒါကအနှိပ်ကပိုပြီးပြည့်စုံနိုင်ပြီးငါတို့အတွက်တောင်ပိုပြီးလွယ်ကူစေတယ် ကော်ဖီကိုသဘာဝဒိန်ချဉ်ဇွန်းနှစ်ခွက်နှင့်ရောမွှေပါ။ သို့မဟုတ်သင်မလိုပါကအုန်းဆီအနည်းငယ်ပါ။ ဒါကြောင့်ဒီအနှိပ်ခံတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကိုပိုပြီးကူညီပေးသည်။ ဖိအားများလွန်းခြင်းနှင့်areaရိယာတစ်ခုလုံးကိုကောင်းစွာဖုံးအုပ်ခြင်းမရှိဘဲလက်ချောင်းထိပ်များနှင့်ဖြစ်လိမ့်မည်။
အော့ဖ်လိုင်းကိုလုပ်ဆောင်ရန်အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုမှာသကြားနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကူညီခြင်းဖြစ်သည်။ သင့်ရဲ့ granites ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အလွန်ကြီးစွာသောရလဒ်ချန်ထားမည်။ သို့သော်၎င်းသည်အသားအရေပေါ်တွင်ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရန်၎င်းကိုအခြားအရာတစ်ခုခုနှင့်အမြဲတမ်းပေါင်းစပ်ရန်လိုအပ်သည်မှာမှန်ပါသည်။ ဤကိစ္စတွင်၎င်းသည်သံလွင်ဆီဖြစ်လိမ့်မည်။ ငါတို့သိသည်အတိုင်း, ဒီ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအားလုံးကိုဖယ်ရှားပေးခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အား antioxidants များပေးခြင်းအပြင်ဓါတ်ကိုထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက်တာဝန်ရှိသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်ရန်လွယ်ကူခြင်းနှင့်၎င်း၏ရလဒ်ကောင်းများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကြိုက်နှစ်သက်သောအတွေးများနောက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဆံပင်သားရေရှိသူများအတွက်ဤဆေးသည်စုံလင်သည်။ ငါတို့သိသကဲ့သို့ကြောင့်ဖြစ်သည် အဆိုပါသံပုရာဟာ sebum ကိုထိန်းချုပ်၏တာဝန်ခံဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်အဲ့ဒါနဲ့သကြားတွေရောက်လာလိမ့်မယ်၊ အဲဒါကငါတို့မှာရှိတဲ့ဖုန်တွေအားလုံးကိုဆွဲယူဖို့နောက်တဖန်တာဝန်ယူလိမ့်မယ်။ ဤကဲ့သို့သောဆေးမျိုးအတွက်မည်သည့်အရာနှင့်မဆိုတူညီသောပမာဏနှင့်တူသည်။ ဒါ့အပြင်သင့်ဆံပင်မှာရှိတဲ့သံပုရာဟာနေကိုရရှိရင်ပေါ့စေနိုင်တယ်ဆိုတာသတိရပါ။ ဒါကြောင့်ဒီအတွေးအခေါ်အမျိုးအစားများကိုညအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့အကောင်းဆုံးမထွက်တော့သည့်အချိန်တွင်အကောင်းဆုံးလုပ်သည်။ သင်လျှောက်ထားရန်သွားသောအခါသင့်ဆံပင်သည်စိုစွတ်နေသင့်သည်။ ဒီကနေ, သင်တစ် ဦး စက်ဝိုင်းလမ်းဖြင့်အနှိပ်နှင့်စတင်ပါလိမ့်မယ်နှင့်မိနစ်အနည်းငယ်အကြာတွင်သင်ပုံမှန်အတိုင်းသင့်ရဲ့ဆံပင်ဆေးကြောနိုင်ပါတယ်။ သငျသညျsurelyကန်အမှန်၎င်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်!
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Bezzia » လှပမှု » Exfoliation သည်သင်၏ဆံပင်ကိုပိုမိုမြန်ဆန်စေရန်အဓိကသော့ချက်ဖြစ်သည်
Inflatable Jacuzzi - အကျိုးကျေးဇူးတွေသိလား
သင်နေထိုင်လိုသောပြင်သစ်ရှိမြို့ ၅ မြို့